Trump Oo si Xamaasadaysan Ugu Hadlay weerarkii Lagu Qaaday Suuriya. – Heemaal News Network
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qorayay Howgalo uu ku sheegay in si caqliyaysan loo fulayay, ka dib markii ay saaka aroornimadii hore Mareykanka, Britiain iyo Faransiiska duqeeyeen goobaha malateriga ee dalka Suuriya.
Xulufada ayaa waxay beegsadeen saddex goobood oo ku yaala dimishiq iyo xomus.
Madaxweynaha ayaa sheegay in weerarrada ay ahaayeen kuwa wax ku ool ah.
Pentagon-ka ayaa weriyeyaasha u sheegay in qorshaha hubka kiimikada uu dib u dhac badan ku keenay suuriya, iyagoo sidoo kalana sheegay in howlgalka uu ahaa mid kooban oo wax ku ool ah.
Madaxweyne Donald Trump oo ka hadlaya xilliga weerarku bilowdey ayaa sheegay in la bartilmaansadey goobaha gaarka ah ee ay yaalaan hubka wata kiimikada iyada oo lagaga jawaabayo weerarkii loo isticmaalay hubka sunta watey ee lagu qaadey magaada Duuma toddobaadkii aynu soo dhaafney.
Dhanka kale madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa si kulul uga jawaabay weerarka, isagoo sheegay laga bilaabo haatan uu il gaar ah ku eegi doono cadawgiisa uuna iska celin doono. Waxaa uu intaasi ku daray in ree galbeedku sharaftooda dhimatay.
Sacuudiga Oo Ku Biiray Shiinaha Iyo Turkiga Oo Ka Soo Horjeestay Shirqool Maraykanku U Dhigay Pakistan
February 22, 2018 Caalamka
Sacuudi Carabiya ayaa lagu soo waramayaa in ay ku biirtay wadamada Turkiga iyo Shiinaha oo ka soo horjeestay isku daygii Mareykanka ay ku dooneysay Isbuucaan inay ku daraan liiska ilaalinta maaliyadeed ee argagixisada caalamiga ah […]
Xildhibaan Ilhaan Cumar Oo la Filayo Inay U Tartanto Booska Uu Iska Casilay Al-Franken.
Senator Al-Franken oo ka tirsanaa Golaha Senatka ee Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in uu is-casilayo ka dib todobaadyo is xig-xigay oo uu la kulmayay eedaymo la xiriira in uu xad gudub dhinaca jirka ah ku […]
Dabeylo xooggan ayaa lagu soo waramayaa in ay sii hurinayaan dabka ka kacay kaymaha Maraykanka, waxayna wararka sheegayaan in magaalooyin dhan laga qaxay. Lamaane dhawaan u dabaaldagay 75 guuradii arooskooda ayaa ka mid ahaa 21 […]